Friday, 01 December 2017 22:23
Friday, 01 December 2017 22:17
Oromiyaatti guyyaa sabootaafi sablmaoottaatiif qophii cimaan taasifamaa jira
Jilli aadaa Oromoo guyyichaaf qophii taasisaa jira
Saboonni, sablammoonniifi ummattoonni Itoophiyaa guyyaa sanadni waliigaltee guddaan walqixxummaasaanii mirkaneesse itti ragga'e Sadaasa 29 bara 1987 waggoota 12n darbaniif waltajjii tokkotti dhufanii sirnoota adda addaatiin kabajataa turaniiru.
Guyyaan kun baranas mataduree, “Heddumminni heera keenyaan miidhage, haaromsa keenyaaf” jedhuun keessummeessummaa Bulchiina Mootummaa Naannoo Affaariin Magaalaa Samaratti torban har'aa sirna ho'aadhaan kabajama.
Qophii ayyaanichaaf gama Oromiyaatiin taasifamaa jirurratti Kibxata darbe waajjirasaaniitti addatti Gaazexaa Bariisaatiif ibsa kan kennan Daarektarri Dhimmoota Kominikeeshinii Waajjira Caffee Oromiyaa Obbo Habtaamuu Damisee akka jedhanitti, naannichatti milkaa'inaafi miidhagina guyyichaatiif tattaaffii cimaan taasifamaa tureera.
Qophii Oromiyaan hirmaannaaf taasisu maddiitti naannoleen oggaa ayyaanicha kabajuuf deeman naannicha qaxxaamuusaanii akka carraa guddaatti fudhachuun jaalala, aadaafi duudhaa Oromoo kanneen birootti agarsiisuuf xiyyeeffannaan irratti hojjetamaa jiraachuus beeksisaniiru.
Kanaafis magaalota keessummoonni keessa darban hundatti qophii addaa taasisuun kabajaafi jaalala ummanni Oromoo obboleewwansaa birootiif qabu kan agarsiifamu ta'uus Obbo Habtaamuun himaniiru.
Gareen aadaa Oromiyaa bakka bu'us shaakalliirra akka jiru ibsanii, Oromiyaarraa hirmaattonni baazaariifi agarsiisa daldalaa har'arraa eegalee geggeeffamurratti qooda fudhatanis garasitti qajeeluusaanii beeksisaniiru.
Muuxannoo bardheengaddaarraa argamerratti hundaa'uun gareen jilaa jaarsolii biyyaa, abbootii amantiifi Gadaa, dubartootaafi dargaggoota bakka bu'e gara Samaraa deemee aadaa, duudhaafi kkf irratti waljijjiirraa muuxannoo geggeessuusaas eeranii, kunis hariiroo ummatoota lamaanii cimsuu keessatti shoora olaanaa qabaata jedhaniiru.
Guyyaan sabootaafi sablammootaa maqaa gaarii naannichaa ijaaruu keessatti gumaacha olaanaa waan qabaatuuf ummanni magaalota naannichaa gareelee aadaa naannooleesaanii bakka bu'uun Oromiyaa qaxxaamuranii darbaniif haaluma barameen waan qabuun keessummeessee geggeessaa akka qabus waamicha taasisaniiru. Ho'ina ayyaanichaatiif akkasumas guyyaa Sirni Gadaa Oromoo Jaarmiyaa Saayinsii, Barumsaaafi Aadaa Dhaabbata Mootummoota Walta'aniitti (yuneeskootti) galmaa'e waggaa 1fa sababeeffachuun sagantaaleen gara garaa boru Finfinneetti kan geggeeffamu ta'uus ibsaniiru.
Ayyaanicha sababeeffachuun naannoorraa eegalee caasaalee sadarkaa sadarkaadhaan jiraniin heeraafi bu'aaleesaarratti mariiwwan kan geggeeffaman ta'uus daarektarichi himaniiru.
Gareen Waajjira Caffeefi Biiroo Industriifi Misooma Magaalaa Oromiyaarraa babahe sadii qophiin magaalonni keessummoonni keessa qaxxaamuran taasisaa jiran maal akka fakkaatu kallattii bahaa, lixaafi kibba naannichaatti imalee mil'achaa jiraachuus addeessaniiru. Mil'annaa kanaan haalli simannaafi qophiin magaalonni ayyaanichaaf taasisaa jiran daaw'atamu ta'uus beeksisaniiru.
“Bu'aa ayyaanichaa eenyuyyuu caalaa kan beeku ummatuma mataasaa waan ta'eef guyyichi guyyaa heerri abbummaa aangoosaa mirkaneessee itti ragga'e sababeeffachuun kan kabajamu ta'uusaatiin iddoo olaanaatu kennamaaf” jedhanii, kanaaf guyyicha ummanni miira olaanaadhaan eega jechuun ibsaniiru.
Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaatti Daarektarri Industirii Aadaafi Qindeessaan Garee Aadaa Oromoo jila ayyaana Sabootaafi Sablammootaarratti hirmaatuu Obbo, Diimaa Abarraa gamasaniin, gareen aadaa godinaalee Oromiyaa 10 keessaa babahe Magaalaa Adaamaatti qophii gochaa jiraachuu beeksisaniiru.
Gareen kun barana waan addaa qabatee dhiyaachuu baatus aadaa Oromoo waltajjicharratti dhiyeessuun shaakala gaariirra jiraachuu himanii, qophiin akkanaa aadaa Oromoo guddisuu, beeksisuufi madda galii gochuuf ni gargaara jedhaniiru.
Gareen aadaa Oromoo kun gareewwan biroo wajjin ta'uun sagantaa waggaa tokkoffaa sirni Gadaa Yuneeskootti galmaa'e sababeeffachuun boru Finfinneetti geggeeffamurratti qophiilee adda addaa ummataaf kan dhiyeessu ta'uus ibsaniiru.
Ogeessi dhimmoota kominikeeshinii waajjira Caffee Oromiyaa Obbo Camadaa Balaayis, ibsa bakka gareen kun itti argamurraa Bariisaaf kennaniin, kootaa Manni Marii Federeeshiniif naannoleef kenneen Oromiyaatti namoonni 110 filatamanii agarsiisa aadaatiif shaakalaa jiraachuu eeranii, kanneen keessaa baay'een namoota kanaan ayyaanicharratti agarsiisummaa aadaatiin hirmaatanii hinbeekne ta'uu beeksisaniiru.
Garee kana keessatti hojjettoonni mootummaa kan hinamatamne ta'uus eeranii, magaalota keessa darbanitti aadaa Oromoo agarsiisaa kan darban ta'uus himaniiru.
Friday, 01 December 2017 22:09
Friday, 01 December 2017 21:58
Friday, 01 December 2017 21:57
Dhaabbilee dhuunfaafi wabii hawaasummaa
Wabii hawaasummaa ummata hunda biraan ga'uudhaaf kutannoon siyaasaa murteessaa yemmuu ta'u, biyya tokko keessatti misooma hawaasummaa kamiyyuu mirkaneessuudhaafis wabiin hawaasummaa dursa kan dhufudha.
Dhalli namaa gaafa humna qabuuufi hojjachuu danda'u hojjatee yeroo umriinsaa gara jaarsummaafi waa hojjachuu dadhabuutti ce'e soorama isa barbaachisa. Namni warshaaleefi dhaabbilee garaa garaa keessatti osoo dalaguu hojirratti miidhaan irra ga'es wabii hawaasummaa barbaada.
Yeroo dheeraadhaaf hojjattoota mootummaa qofarratti rarra'ee hojjatamaa kan ture wabiin hawaasummaa, wayitii ammaa kana garuu hojjattoota dhaabbilee dhuunfaa birattis hojirra ooluunsaa hamma tokko waliin ga'iinsi akka dabalu taasiseera.
Haa ta'uu malee dhaabbilee dhuunfaa hunda barbaadanii galmeessuu irratti hanqinni jiraachuu Ejensiin Wabii Hawaasumnmaa Dhaabbilee Dhuunfaa ni ibsa.
Daarikterri ejensichaa Obbo Tsaggaayee Gabramika'el akka jedhanitti, ejensichi babal'inna wabii hawaasummaa dhaabbiilee dhuunfaa dabaluudhaaf hojjachaa jiraachu sagantaa qaamota dhimmichi ilaalu waliin marii torban darbe taa'amerratti duddataniiru. Raawwiin ejensichaa yeroorraa gara yerootti fooya'aa jiraachuufi kunis qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin qindoomanii hojjachuufi galtee achirraa argamu bifa guutuu ta'een hojjitti hiikuun akka ta'e ibsu.
Dhaabbileen dhuunfaa gara daldalaafi hojiitti galan dabalaa jiraachuu eeranii, isaan hunda faana bu'anii galmeessuun walqabatee hanqinni ni mul'ata. Kunis keessumaa dhaabbileen daldalaa xixiqqoon bakka heddutti gara hojiitti waan galaniif isaan kana hunda faana bu'anii galmeessuun kan ulfaatu ta'uu dubbatu.
Sababa kanaanis dhaabbilee dhuunfaas ta'e hojjattoota dhaabbilee dhuunfaa keessa hojjatan hunda galmeessuun kan hin danda'amne ta'uusaafi yeroo ittaanutti garuu bifa gurmaa'aa ta'een raawwii gama kanaan jiru fooyyeessuudhaaf kan hojjatan ta'uu ibsu.
Dhaabbileen faddaaltotaafi ejensiiwwan qaama sadaffaadhaan hojiitti nama qacarsiisan hedduun bifa seera qabeessa ta'een faayida hojjattootni argachuu qaban kennaa kan hin jirre ta'uu kan himan immoo hirmaataa sagantichaa kan turan Obbo Asnaaqe Abaatee, hojjataa mindaansaa 3000 ta'e irraa soorama qofaadhaaf qarshii 800 irraa muraa jiraachuusaanii dubbatu.
Keessattuu ejensootni qaama sadaffaa ta'anii nama qacarsiisan kunniin hojiiwwan akka qulqullinaafi waardiyyaa waan ta'eef hojjattootni kunniin mirgasaanii kabajsiifachuudhaafi kan isaan rakkisu ta'uusaatiin, mootummaan lammiilee humnasaanii baasanii wabiin hawaasummaa bifa sirrii ta'een isaaniif hin kabajamne kanniiniif birmachuu akka qabu gaafatu.
Qaala'iinsa jiruu yeroorraa gara yerootti dabalaa jiruun wal qabatee namootni soorama bahan hedduun rakkoo hamaa keessa jiraachuu kan himan immoo, sooramarratti kan argaman Obbo Tasfaayee Yordaanos, jiruun yeroo isaan hojii irra turaniifi amma jiru tasumaa kan walin madaalle ta'uusaa ibsu.
Namni tokko hojii dhaabee soorma bahus battalumatti kaffaltiin sooramaa kan gadi hin lakkifamneef ta'uunsaas rakkoo gama biraa ta'uu kan himan Obbo Tasfaayeen, seerichi kan jedhu namni tokko ji'a kana hojii dhaabnaan ji'a ittaanutti kaffaltiin sooramaa akka kaffalamuuf kan heeyyamamu waan ta'eef, rakkooleen raawwachiistummaadhaan walqabatanii jiran kunniin hatattamaan furamuu kan qaban ta'uu dubbatu.
Ejensichi ji'oottan sadan darban qofatti dhaabbilee dhuunfaa irraa qarshii biiliyoona 1.6 walitti kan qabe yemmuu ta'u, kanarraayyis bu'aa qarshii miiliyoona 54 argateera.
Dhaabbilee kuma ja'aafi 92fi hojjattootni kuma 40fi 25 ta'an immoo ji'oota sadan darbanitti galmeeffamuusaanii ragaan ejensichaarraa argame ni mul'isa.
Walumaagalatti, waliin ga'iinsa wabii hawaasummaa dhaabbilee hunda keessatti mirkaneessuun hojii xiyyeeffannoo guddaa barbaaduudha.
Torban kana/This_Week 17493
Guyyaa mara/All_Days 1442273